archana: सम्पन्नताको भुत
परिवारलाइ छोरा छोरी बिदेशमा छ भनेर फर्शी जत्रो नाक गर्दै ठिक्क छ,
नेताहरुलाई बिदेशबाट टन्न रेमिट्यान्स आएकै छ भनेर कुर्शी लुछाचुड गर्दै ठीक्क छ,
मान्छेको इज्जत, मान, मर्यादा घरको तला अनुसार मापन हुन्छ,
मान्छेको खुशी, सुख कती जग्गा जमिनको परीधि छ त्यस्मा मापन हुन्छ,
मान्छेको धन बिबाह्, बर्तबन्ध,पार्टीमा कती खर्च गर्‍यो भनेर मापन हुन्छ,
मान्छेको सुन्दरता कती महँगो लुगा लायो र कती गहना लगायो भनेर मापन हुन्छ, त्यस्तो देशका हामी!!
मलाई कहिलेकाही सोचेर अजिब लाग्छ हाम्रो समाज कता तिर गै राखेको छ? किन यती बिग्न हामी देखावटी गर्न लागेम नै था छैन ।
मेरो एक जना अष्ट्रेलियन साथी नेपालको दुर्गम ठाउमा कामको लागि गएकि थि र फर्कने बेलामा काठमाडौंको नेवार परिवारको बिहा देखेर तेरो देशमा मान्छेलाई लन्च/डिनर गर्ने पैसा छैन कोही कोही चाँही १ केजीको सुन लगाएर अलिशान भब्य पार्टी गर्दा रैछन भनी ।
हाम्रो समाजमा राम्रो मान्छे पनि नभएका होइनन् । ति राम्रो ह्र्दय भएका मान्छेलाई कोटी कोटी नमस्कार छ । प्रक्रितीले पनि दिएको नै हो। बिदेशीहरुको नेपाल जाने सपना हुन्छ । सुर्य पनि दिन दिनै उदाएकै छ, चन्द्रमा पनि हरेक पुर्णिमामा झल मल भएकै छ । कसैले आफ्नो रङ फेरेका छैनन् ।
किन यो औधी अचाक्ली सम्पन्नताको भुत चढेको नै मैले बुझेको छैन ।
मेरो पनि नेपाल चाडै फर्कने मनस्थिती भएकोले मेरो आमालाई घर चलाउन कती खर्च लाग्छ आमा भनेर सोध्छु। आमाले मिनिमम २५०००-३५००० रे । मेरो त झन्डै सातो गएको । मेरो आमा भन्नु हुन्छ महङ्गीले आकाश छोएको छ । त सानो हुँदा तेरो बाउको ५००० तलबले छ जनाको परिवार पालेर पनि मैले अली अली जम्मा गर्ने सक्थे अहिले त २०,००० पनि केही न केही भन्नु हुन्छ।
यस्तो चरम महङ्गीमा पनि ॠण काटेर भए नि देखावटी गर्न छोड्दैनौ । संसारलाई था’ कि हामी विश्वकै गरीब देश मध्य ३२ औ स्थानमा पर्छौ यस्तो अवस्थामा नचाहिने ढाचा बनको भालुले मखमली जुत्ता लाए जस्तै हो।
Posted by archana at 2/16/2012
yeah its true i like your blog
Nice blog's dd ..please just click ...i said something for you. http://www.youtube.com/watch?v=_I_2ynM_rz0
thank you anuz bhai for your effort.
आदियोगी शिव - योगीहरुका प्रथम गुरु
नराम्रो काम गरे सबैले गाली गर्छन्, राम्रो काम गरे ...